Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah » RIKOOR: Miyey Barcelona sameyn kartaa rikoorkii ay shan sano ka hor sameysay kooxda Real Madrid?Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah
RIKOOR: Miyey Barcelona sameyn kartaa rikoorkii ay shan sano ka hor sameysay kooxda Real Madrid?
Barcelona ayaa ah kooxda aan ilaa iyo haatan laga adkaan kulamada La Liga – waxeyna ilaashadeen rikoorkooda kulan ay soo rogaal celin fiican sameeyeen daqiiqadahii ugu dambeeyay kulankii Sevilla markaas oo ay 2-2 ku kala baxeen labada kooxood.
Laba dhibcood ayey lumiyeen, waxeyna taasi ciriiri ka dhigeysaa iney kooxda gaarto rikoorka 100-ka dhibcood ee horyaalka La Liga taas oo ay sameysay hadda ka hor Real Madrid.
Barcelona waxey hadda leedahay 76-dhibcood, waxeyna 100-ka dhibcood u jirtaa 24-dhibcood taasoo ka dhigan in Barcelona ay u baahan tahay 8-da kulan ee kaga haray horyaalka iney dhamaan wada guuleysato si ay u gaarto rikoorkaan uu sameeyay Jose Mourinho 2012/2013.
Kulamada ay ciyaari doonto ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka waxaa ka mid ah: Leganes (minan), Valencia (minan), Celta Vigo (marti), Villarreal (minan), Deportivo La Coruna (marti), Real Madrid (minan), Levante (marti), Real Sociedad (minan).
Waxaa jira kulamo culus oo sadex ah waxeyna lakala ciyaari doonaan Real Madrid, Villarreal iyo Valencia.